जनचेतनाले बार्षिक उत्सव सम्पन्न गर्यो । – Gorkha Sansar
माघ १७, गोरखा ।
गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित जनचेतना प्रा.वि.को २९ औं बार्षिक उत्सव तथा अभिभावक भेला सम्पन्न भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमनाथ पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागी सवैले एक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सोही क्रममा उहाँले शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुले वडा कार्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । स्थानीय समाजसेवी अर्जुन बहादुर पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा च्याङ्ली स्वास्थ्य चौकी का प्रमुख भरतराज पाण्डेले बालबालिकाको शैक्षिक साथै मानसिक विकासको लागी सन्तुलित भोजन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विद्यालयकी शिक्षिका हरिकला श्रेष्ठले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक गणेशप्रसाद पाण्डेले ३४ लाख ६१ हजार ५३ रुपैयाँको आय व्यय विवरण पेश गर्नुभएको थियो । सो विद्यालयमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको अवस्थामा सो स्थानमा विद्यालय टिकाउन समस्या हुने अवस्थामा रहेकोले स्थानीयहरु विद्यार्थी बटुल्न जागरुक भएका छन् ।